ICustom I-Fry Panel yangaphambili yeFry Pan - iChina I-Iron I-Fry Panel yangaphambili yeFry Pan abavelisi, abaxhasi
Iinkcukacha zemveliso: JT 4002A Izixhobo: Isimbi yentsimbi ubungakanani: 22 * ​​2.9 Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Inkcazo yemveliso: Umgangatho ogudileyo kunye nomgangatho ofanayo womgangatho kuzo zonke iimveliso kuba umzimba wokuphosa wenziwa ngumgca wokubumba we-DISA.
Iinkcukacha zemveliso: JT 6250, JT7251 Izixhobo: ubungakanani besinyithi: 16 * 3.8, 18 * 4.3 Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Inkcazo yemveliso: Umgangatho ofanelekileyo womgangatho kunye nomgangatho womgangatho ofanayo kuzo zonke iimveliso kuba umzimba ophosayo wenziwe yi-DISA auto umgca wokubumba.
Iinkcukacha zemveliso: JT 60W, JT 63 W Matri: ubungakanani besinyithi: 22.8 * 2, 24.5 * 1.8 Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Inkcazo yemveliso: Umgangatho ofanelekileyo womgangatho kunye nomgangatho womgangatho ofanayo kuzo zonke iimveliso kuba umzimba ophosayo wenziwe I-DISA auto yokuumba umgca.
Iinkcukacha zeMveliso: JT 70, JT 72, JT 71 Izinto ezibonakalayo: ubungakanani besinyithi: 16.5 * 4.2, 20.5 * 4, 25 * 4.6 Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi elintsundu Inkcazo yemveliso: Umgangatho ofanelekileyo womgangatho kunye nomgangatho ofanayo womgangatho kuzo zonke iimveliso kuba umzimba ophosayo wenziwe yi-DISA auto-forming yokubumba.
Iinkcukacha zeMveliso: JT 140, JT 190 Izixhobo: cast iron preseasoned size: 15 * 2.9, 19.5 * 4.5 Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Inkcazo yemveliso: Umgangatho ofanelekileyo womgangatho kunye nomgangatho womgangatho ofanayo kuzo zonke iimveliso kuba umzimba ophosayo wenziwe I-DISA auto yokuumba umgca.
Iinkcukacha zemveliso: I-JT 87A isixhobo: Isinyithi esenziwe kwangaphambili yentsimbi: 23 * 3.3 Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Inkcazo yemveliso: Umgangatho ocacileyo womgangatho kunye nomgangatho ofanayo womgangatho kuzo zonke iimveliso kuba umzimba wokuphosa wenziwa ngumgca wokubumba we-DISA.
Iinkcukacha zeMveliso: JT 01, JT 01W Izinto: Ukuphosa i-iron ngaphambili umzimba wenziwa yi-DISA auto-forming yokubumba.
igama lemveliso cast isikwere yentsimbi skillet iseti ububanzi 26x26cm ubude be-5cm, ukubekwa kwangaphambi kokupakisha ibhokisi emdaka okanye umbala webhokisi uphawu oluchanekileyo lwento yokubeka ubushushu Ukugcina ubushushu kufanelekile kuzo zonke izitovu Ugqibelele ukupheka kwaye ukhonza iinxalenye zemifuno, amacala, kunye neesuphu. nditsho nokushushubeza; izimbobo zetywina ekunambeni ngelixa izibambo zivumela ukuthutha ngokulula i-FDA evunyiweyo yensimbi yangaphambi kwexesha elifanelekileyo ivumela ukusetyenziswa kwangoko kunokuba ...